Inkwenkwezi yaseBhetelehem kunye nokuthandana nokuzalwa kukaYesu
Ukuba i-Comet, iNkwenkwezi yaseBhetelehem Inokunceda Ukuzalwa kukaYesu
UYesu wazalwa nini? Umbuzo ubonakala unempendulo ecacileyo ekubeni inkqubo yethu yokuthandana isekelwe kwingcamango yokuba uYesu wazalwa phakathi kweeras esibizwa ngokuba yi- BC ne- AD Ngokongeza, abo bawenzayo bhiyozela ukuzalwa kukaYesu kufuphi ne-Winter Solstice, kwiKrisimesi okanye i-Epiphany (ngoJanuwari 6). Ngoba? Umhla wokuzalwa kukaYesu awuchazwa ngokucacileyo kwiVangeli. Ukucinga ukuba uYesu wayengumntu wembali, iNkwenkwe yaseBhetelehem yenye yezona zixhobo ezisisiseko ezisetyenziselwa ukubala xa wazalwa.
Kukho iinkcukacha ezininzi eziphazamisayo malunga nokuzalwa kukaYesu, kubandakanywa nexesha, unyaka, iNkwenkwezi yaseBhetelehem, kunye nokubalwa kukaAgasti . Imihla yokuzalwa kukaYesu ihlala ijikeleza malunga ne-7-4 BC, nangona ukuzalwa kungaba neminyaka emininzi kamva okanye mhlawumbi ngaphambili. Inkwenkwezi yaseBhetelehem ingaba yinto ebhakabhakayo yasezulwini ebonakaliswe kwiiplanethiyam: iiplanethi ezimbini ngokubambisana, nangona ingxelo yeVangeli kaMathewu ibhekisela kwinkwenkwezi enye, kungeyiyo inxaxheba.
Emva kokuzalwa kukaYesu eBhetelehem eYuda ngeentsuku zikaHerode ukumkani, magi avela empumalanga waya eYerusalem, esithi, "Uphi na ozelwe yiNkosi yamaYuda, ngokuba sibone inkwenkwezi yakhe empumalanga, beza kumnqula. " (Mat 2: 1-1)
Ityala elungileyo linokuthi lenziwe i-comet. Ukuba ilungelo lithathwa, lingawuniki nje kuphela unyaka kodwa nangona ixesha lokuzalwa kukaYesu.
Ngekhulu le-4, izazi-mlando kunye nabafundisi bezenkolo babhiyozela iKrisimusi yasebusika, kodwa kwada kwada kwafika ngo-525 ukuba unyaka wokuzalwa kukaYesu wawusekwe.
Kwakuyixesha apho uDionysius Exiguus enqumle ukuba uYesu wazalwa emva kweentsuku ezili-8 ngaphambi koNyaka woNyaka omtsha ngonyaka we-AD. Iincwadi zeVangeli zisinika izikhokelo zokuthi uDionysius Exiguus wayengalunganga.
Inkwenkwezi yaseBhetelehem njengeCetet
NgokukaColin J. Humphreys "kwiNkwenkwezi yaseBhetelehem - iCetet ngo-5 BC - kunye noMhla wokuzalwa kukaKristu," ukusuka kwiNgxelo yekota yeRoyal Astronomical Society 32, 389-407 (1991), uYesu mhlawumbi uzalwe ngo-5 BC, ngeli xesha ixesha lesiTshayina libhalela i-comet ehamba phambili, entsha, ehamba ngokukhawuleza-"i-sui-hsing", okanye inkwenkwezi ephethe umsila okhulayo kwi-Capricorn yesibhakabhaka.
Lo ngumnombo uHumphreys ukholelwa ukuba wayebizwa ngokuba yiNkwenkwezi yaseBhetelehem.
Inkwenkwezi yeBhetelehem ibhalwe kuqala kuMateyu 2: 1-12, ebonakala ibhaliwe malunga ne-AD 80 kwaye yayisekelwe kwimithombo yangaphambili. UMateyu uxela ngamagosa avela eMpuma ekuphenduleni inkwenkwezi. Ama-magi, awazange abizwe ngookumkani ukuya kwekhulu le-6, mhlawumbi beenkwenkwezi / izazi zeenkwenkwezi zaseMesopotamia okanye ePersia apho, ngenxa yamaYuda amaninzi, zaziqhelanisa nesiprofeto samaYuda malunga nomsindisi-ukumkani.
U-Humphreys uthi kwakungavamile ukuba magi a tyelele ookumkani. UMagi wahamba kunye noKumkani waseArmenia xa ehlonipha uNero , kodwa ukuba magi a tyelele uYesu, isibonakaliso seenkwenkwezi kufuneka sibe namandla. Yingakho iKrisimesi ibonakalisa kwi-planariar ibonisa ukuhlanganiswa kweJupiter kunye neSaturn ngo-7 BC. I-Humphreys ithi le nto ibonakaliso lenkwenkwezi enamandla, kodwa ayinelisekanga intsingiselo yeVangeli yeNkwenkwezi yaseBhetelehem njengeenkwenkwezi enye okanye enye ihleli phezu isixeko, njengoko kuchazwe ngabapheli-mlando bexesha elidala. U-Humphreys uthi amazwi afana ne "'hung hang over' abonakala asebenza ngokuthe ngqo kwiincwadi zamandulo ukuchaza i-comet." Ukuba kukho ubungqina obonakalayo obubonisa ukudibanisa kweeplanethi ezichazwe ngabadala, le ngxabano iya kuphumelela.
I-New York Times kwinqaku (esekelwe kwi-National Geographic Channel show ekuzalweni), Ukuthi Ukuzalwa KukaYesu Kubonakala Kubukeka Kanjani, kukhankanya uJohn Mosley, evela kwiGriffith Observatory, okholelwa ukuba yintlangano engaqhelekanga kaVenus noJupiter ngoJuni 17 , 2 BC
"Iiplanethi ezimbini zahlanganisana nento enye eqaqambileyo, inkwenkwezi enkulu enkulu esibhakabhakeni, kwicala laseJerusalem, njengoko libonakala lisuka ePersi."
Le nkwenkwezi yasezulwini ijongene nengxaki yokubonakala kweenkwenkwezi enye, kodwa kungekhona inkcazelo malunga neenkwenkwezi.
Ingcaciso yokuqala yokuqala yeenkwenkwezi yaseBhetelehem ivela kwikhulu lesithathu leminyaka u-Origen owayecinga ukuba yi-comet. Abanye abachasayo ingcamango yokuba kwakuyi-comet bathi ama-comet ahlanganiswe neentlekele. Izibalo ze-Humphreys ukuba intlekele kwimfazwe kwelinye icala ithetha ukunqoba omnye.
Ngaphandle koko, ii-comets nazo zijongwa njengezixhobo zokutshintsha.
Ukuqulunqwa kweyiphi i-Comet
Ukucinga ukuba iNkwenkwezi yaseBhetelehem yayiyi-comet, kwakukho iminyaka engama-3, i-12, yesi-5 kunye ne-4 BC. Ngokusebenzisa usuku olufanelekileyo olufanelekileyo, kwiiVangeli, unyaka we-15 kaTibheriyo Khesari (AD 28/29), ngelo xesha UYesu uchazwa ngokuba "malunga ne-30," 12 BC sele isondele kakhulu kumhla wokuzalwa kukaYesu, ukususela ngo-AD 28 kwakuya kuba ngu-40. UHerode Omkhulu ngokuqhelekileyo uthathwa ukuba wafa entwasahlobo ka-4 BC, kodwa esaphila xa uYesu wazalwa, okwenza 4 BC ingabonakali, nangona kunokwenzeka. Ukongezelela, amaTshayina akachazi i-comet ye-4 BC Oku kushiya i-5 BC, umhla u-Humphreys ukhetha. AmaTshayina athi i-comet ibonakala phakathi kuka-Matshi 9 no-Ephreli 6 kwaye yahlala ngaphezu kweentsuku ezingama-70.
I-Humphreys ijongene neengxaki ezininzi ezinxulumene ne-5 BC dating, kubandakanye enye engekho yenkwenkwezi yenkwenkwezi. Uthi i-Augustus i-census eyaziwa kakhulu yenzeke ngo-28 no-8 BC, kunye ne-AD 14. Le yabantu baseRoma kuphela. UJosephus noLuka 2: 2 babhekisela kolunye ubalo, apho amaYuda kuloo ndawo ayeya kuhlawulwa. Olu babalo lwaluphantsi kweKiriniyo, urhulumente waseSiriya, kodwa kwakusemva kwexesha lokuzalwa likaYesu. U-Humphreys uthi le ngxaki inokuphendulwa ngokucinga ukuba ubalo lwabantu abuzange luhlawulwe irhafu kodwa lubophezele ukuthembela kuKesare, okushiwo nguJosephus (uAnt. XVIIiii.4) unyaka kunyaka ngaphambi kokufa kukaKumkani uHerode. Ukongezelela, kunokwenzeka ukuguqulela isahluko sikaLuka ukuba kwenzeke ngaphambi kokuba urhuluneli nguKiriniyo.
Umhla wokuzalwa kukaYesu
Kuzo zonke izibalo, i-Humphreys idonsa ukuba uYesu wazalwa phakathi kuka-Matshi 9 no-Meyi 4, 5 BC Leli xesha lunegunya elongezelelweyo lokuquka iPasika ye-year, ixesha elihle kakhulu lokuzalwa kukaMesiya.
Ukuphuhliswa koLuntu lweNkcazo
Ngaba iRelielians Inkolo Eyingozi?